Madasha Badbaado Qaran oo soo dhaweysay go'aankii Midowga Afrika | KEYDMEDIA ONLINE
Madasha Badbaado Qaran oo soo dhaweysay go’aankii Midowga Afrika
Madasha Badbaado Qaran ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku taageen go'aankii shalay ay soo saareen Golihii Amniga iyo Nabadda ee Midowga Afrika taasoo ay ku diideen muddo kordhintii Golaha Shacabka ee 12 Abriil.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madasha Badbaado qaran oo ay ku mideysan yihiin Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, Guddoomiyaha Aqalka Sare BJFS iyo Golaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa ay ka shireen arrinta ku saabsan muran siyaasadeedka Soomaaliya iyo Go'aankii Golaha Amniga iyo Nabadda ee Midowga Afrika.
War qoraala oo ay soo saareen Madasha Badbaado Qaran ayaa lagu taageeray go'aankii shalay kasoo baxay golaha, waxaana loo riyaaqay 14 -kii qodob ee ay soo saareen golaha.
Goluhu waxay soo dhaweeyeen in dib loogu laabto miiskii wadahadalka, iyo in dib boorka looga jafo heshiiskii 17 -ka Sebtembar, kaasoo lagu tilmaamay xalka kaliya ee furaha u ah Nabadda Soomaaliya iyo in la helo doorasho la isku raacsan yahay oo wadar ogol ah.
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo oo doonayay sidii uu ku sii seeta-dheereysan lahaa kursiga ugu sarreeya dalka ayaa sameystay Muddo kordhin ay u ansixiyeen hal aqal oo kamida Baarlamanka JFS.
Dhammaan xubnaha wakiilada beesha caalamka oo ay ku jiraan Q.M, USA. UK, Midowga Yurub iyo Midowga Afrika ayaa horay u cambaareeyay muddo kordhinta loo sameeyay madaxweyne Farmaajo.